के मानव र रोबटको सहवास सम्भव छ ? « Karobar Aja
एजेन्सी लन्डन- रोबटबारे लेख्ने एक जना लेखकले आफ्नो रिपोर्टमा भनेका छन्, ‘बालबालिकाजस्ता देखिने सेक्स रोबट आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।’
डे मोन्टफोर्ट विश्वबिध्यालयमा रोबटको नैतिकता सम्बन्धी काम गर्ने डा. क्याथलिन रिचर्डसन केटाकेटीजस्तै लाग्ने सेक्स रोबटको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्छिन्। तर, उनले सबैखाले सेक्स रोबटमा प्रतिबन्धको माग गरेकी छैनन्। उनी भन्छिन्, ‘यहाँनेर समस्या रोबटमा होइन, यौन व्यवसायमा छ। सेक्स रोबट पनि एक प्रकारको पोर्नोग्राफी नै हो।’
श्रोत स्वास्थ्य खवरपत्रिका